Imisa Wasiir Ayay Soomaalidu Ku Leedahay Xukuumadda Itoobiya? | Raxanreeb.net
Raysal Wasaaraha dalka Itoobiya ee dhowaan la magacaabay Abiy axmed ayaa magacaabay Golaha Wasiiradda ee Xukuumadiisa la shaqeyn doona.
Xukuumadda cusub ee dowladda Itoobiya ee uu magacaabay Raysal Wasaare Abiy ayaa waxay ka kooban tahay 16 Wasiir oo ka kooban qowmiyadaha waddanka Itoobiya, waxaana ka mid ah Wasiiro hore uga tirsanaa xukuumadii hore. Wasiirka Gaashaandhiga ayaa loo magacaabay nin horay wasiir uga ahaa Wasaaradda Macdanta.
Raysal Wasaaraha dalka Itoobiya wuxuu golihiisa Xukuumadda ku soo daray Laba Wasiir oo la siiyey Soomaalida ku nool Kilalka 5-aad.
Ubax Maxamed – Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyada.
Ahmed Shide – Wasiirka xafiiska xiriirka dowlada.
Ra’isul wasaarihii hore Desalegn ayaa iska casilay xilka Raysal Wasaaranimo Waa markii ugu horeysay ee dowladda Itoobiya ay yeelato dowlad uu Raysal Wasaare ka yahay nin Muslim ah, waxaana xilkan loo dhaariyey 2dii April ee sanadkan.
Siyaasadda dowladda Itoobiya ayaa sanadkan waxay muujinaysaa furfurnaan iyo in lala heshiiyo kooxaha Mucaaradka ah, waxaana xabsiyada dalkaas laga siidaayey maxaabiis fara badan oo siyaasad u xirxirnaa.